Iimaylka "IATA khiyaanada khiyaanada" ayaa wax u dhimaysa kombiyuutarkaaga
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Badbaadada Safarka & Xaaladaha Degdega ah » Iimaylka “IATA khiyaanada khiyaanada” ayaa wax u dhimaysa kombiyuutarkaaga
Airlines • Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • News • Ammaanka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Iimaylka “IATA khiyaanada khiyaanada” ayaa wax u dhimaysa kombiyuutarkaaga
IATA waxay soo bandhigeysaa walxaha naqshadeynta muhiimka ah ee IATA Travel Pass
IATO.org ma aha IATA.org, laakiin waa cinwaan emayl been abuur ah oo la isku dayay in la xado aqoonsigaaga ama tanaasulka oo la burburiyo kombiyuutarkaaga.
iimaylada cinwaankan ayaa hadda loo gudbinayaa IATA shirkado socdaal oo la oggol yahay ama ku xiran.
Shirkad leh iimayl soo noqosho ah [emailka waa la ilaaliyay] wuxuu dirayaa iimaylada fayraska iyada oo ujeedadu tahay in la burburiyo nidaamyada kombiyuutarrada wakiillada socdaalka.
Iimaylka waxaa loogu talagalay in lagu marin habaabiyo dadka qaata si ay u furaan lifaaq xaasidnimo leh oo la ilaaliyo oo loo yaqaanno pass-code.
IATA kamay jawaabin.
Iimayl phishing ah ayaa shirkad dambiileyaal ah u dirtay wakiillada socdaalka Mareykanka ee xiriirka la leh IATA,
Waxay umuuqataa iimaylkani inuu ka yimid IATA, the Xiriirka gaadiidka caalamiga ah.
Iimaylku wuxuu ka codsanayaa dadka qaata inay furaan lifaaq xaasidnimo ah oo ay adeegsadaan erayga sirta ah ee lagu siiyay inay sidaas sameeyaan. Marka qaataha uu ku jiro eraygan sirta ah, lifaaqa ayaa ku sumayn doona kombiyuutarada qoraal xaasidnimo leh.
Iimaylka xaasidnimada ah ee iato.org (maaha iata.org) ayaa akhrinaya:
Wakiilka Qaaliga ah,
Waxay IATA u soo jeedisay inay jirto khiyaano joogto ah oo haakarisku u galayaan nidaamyada ballansashada Wakiilada iyo bixinta tigidhada hawada. Weeraradu waa kuwo aad u heer sarreeya, oo u horseedaya oo keliya khasaare dhaqaale oo aad u weyn Wakiilada laakiin sidoo kale jebinaya nidaamyada Wakiilka.
Si aad isaga ilaaliso weeraradan tirada badan, waxaan si xoog leh ugu talineynaa tallaabooyinka amniga ee ku lifaaqan.
Sababo ammaan awgood, isticmaal xeerkan si aad u furto lifaaqa: 123
Adeegga Macmiilka IATA
Qof kasta oo helaya email noocaas ah waa inuu tirtiraa oo nadiifiyaa qashinka.